DFS oo dalbatay in la sameeyo Guddi ka Shaqeeya soo celinta xiriirkii Kenya | Banaadir Times
HomeWararDFS oo dalbatay in la sameeyo Guddi ka Shaqeeya soo celinta xiriirkii...
DFS oo dalbatay in la sameeyo Guddi ka Shaqeeya soo celinta xiriirkii Kenya
Dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya qaabab dib loogu soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya.
“Wasaaradda arrimaha dibedda ee Soomaaliya waxay mar kale xaqiijineysaa sida ay uga go’an tahay dib u soo celinta iyo dardargelinta diblomaasiyadda, ganacsiga iyo dadka xiriirka dadka si ay u wanaagsanaato Soomaaliya iyo Kenya,” ayay wasaaraddu ku tiri hadal ay soo saartay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, oo soo dhaweysay dib u furitaanka Kenya ee hawadeeda, ayaa sheegtay in tilmaanta wanaagsan ee ay muujisay Nairobi ay tahay bar bilowga wada xaajoodyada looga gol leeyahay in si caadi looga dhigo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal.
Hadalkan ayaa soo baxay kadib markii Kenya ay ka qaaday xayiraadii saarneyd muddo bil ku dhow oo ay saarneyd duulimaadyada aada ama ka baxa Soomaaliya, taas oo la geliyay iyadoo uu jiro khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhexeeya labada dal ee deriska ah.
Kenya waxay sheegtay in dhamaadka xayiraada ay tahay tilmaam niyad sami ah iyadoo rajeynaysa inay u horseedi doonto xiriir caadi ah oo ay la yeeshaan Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda sheegtay in dib u furista hawada ay tahay tallaabo muhiim ah oo horay loogu qaaday hannaanka sare loogu qaadayo ganacsiga, isgaarsiinta iyo isu-socodka muwaadiniinta labada dal.
“Labada dal ee walaalaha ah waxay waligood iska kaashadeen amniga, ganacsiga iyo xiriirka dhaqan ee wadajirka ah ee salka ku haya danaha guud, deris wanaaga iyo ixtiraamka madaxbanaanida iyo madaxbanaanida siyaasadeed,” ayay tiri wasaarada ariimaha dibadda Soomaaliya.
Previous articleWafdi gaaray Magaalada Beledweyne & kulamo ka bilaawday
Next articleMaamulka G/Banaadir oo soo saaray Amar ku socda Shacabka